१० कित्ता मात्र परेर हैरान हुनुहुन्छ? खुल्यो हिमाल दोलखाको आइपिओ, कति पर्ने सम्भावना? – Hamrosandesh.com
१० कित्ता मात्र परेर हैरान हुनुहुन्छ? खुल्यो हिमाल दोलखाको आइपिओ, कति पर्ने सम्भावना?
आइपीओमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई आज बुधबार असार २५ गतेदेखि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण शेयर (आइपिओ) खुलेको छ ।
कम लागतमा निर्माण यसको यस हाइड्रोपावर कम्पनलिे आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई निकट भविष्यमै राम्रो मुनाफा दिने देखिन्छ ।
७६ लाख ७२ हजार २१० कित्ताको आइपिओ भएकोले , आफ्नो गछ्य अनुसार आवेदन दिए हुनेछ । मागे अनुसारको लगानी पर्ने सम्भावना धेरै छ ।